Mahagaga fa eo mandrakariva Izy
Salamo 23:4 "Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho ; fa Ianao no amiko. "
“Inoako Ilay mahagaga ahy fa teo mandrakariva, hatramin’izay nahatsiarovako tena. Izany miaraka amiko izany, na eo aza ireo fanontaniako, ireo fisalasalako, ny tsy fahaizako mankasitraka, dia Ilay Andriamanitra Mpahary sy Mpanavotra, Ilay nitsangana tamin’ny maty, nandresy ny fahafatesana.
Ny fahalalana entin’ny siansa mikasika ny tontolo, sy mikasika ny selalova (chromosomes), dia tsy manozongozona ny finoako an’i Jesosy Kristy. Arakaraka ny amakiako boky, arakaraka ny ihainoako ireo manampy ahy hahatakatra ny momba izao tontolo izao, no mampahazava amiko fa fanomezana avy amin’Andriamanitra ny finoana, izay iombonako amin’olona an-tapitrisany taloha sy ankehitriny. Mino an’Andriamanitra aho, satria nivelona sy mbola mivelona amin’ny fifaliana vokatry ny fankasitrahana ireo fanomezany. Fifaliana tsy simba na dia tsapako aza ny fahalemeko. Ny itokiako dia ny fiombonam-pon’Ilay Mpanavotra sy ny toetrany tsy miovaova. Kanefa, arakaraka ny inoako ny famindrampon’Andriamanitra no ahatsapako ny tsy fahamendrehako hahazo izany. Bitika dia bitika ny finoako, matetika. Toy ny fanekena mitsipotipotika ihany no atolotro an’Andriamanitra...
Araka ny eritreritro, dia tao anaty fijaliana ihany aho vao hoe niantoraka tanteraka tamin’Andriamanitra. Fangirifiriana mafy manoloana ny fanaintainan’ireo olon-tiana, nefa tsy afaka manampy azy akory. Koa dia zava-poana ihany izay mety ho fahendren’olombelona. Amin’ireny fotoana ireny dia tsy afaka hahita fiadanam-po raha tsy ao amin’ny fitiavan’i Kristy irery ihany, manaiky hanaraka Azy any amin’izay ialohavany lalana antsika. Tompo ô, sokafy ny foko handray ilay tena fitiavana, ary enga anie ny sitraponao no hatao !”